ကျောက်တည်နေလား မပူပါနဲ့ (၂)ခွက်ထဲသောက်တာနဲ့ တည်နေတဲ့ကျောက် ကျလာတဲ့ မြန်မာ့ဆေးနည်းလေး ဖတ်ကြည့်ပါ – Suehninsi
ကျောက်တည်နေလား..မပူပါနဲ့…၂ ခွက်တည်း သောက်ရုံနဲ့ တည်နေတဲ့ကျောက် ကျလာတဲ့ မြန်မာ့ဆေးနည်းလေးကို
ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…ဆန်ဆေးရေ နဲ့ စပါးလင် စိမ်ပြီး သောက် တာတစ်ညနဲ့ တစ်မနက် ၂ ခွက်သောက်ရုံရှိသေးတယ် ကျောက် ကျလာတယ်…
အဖေ့ ဆီက ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆေးနည်းဖြန့်ပေးတာပါ…လက်တွေ့ တစ်ရက်နဲ့တစ်ည အောင့် တာ မခံနိုင် လို့ ဆေးရုံပြတာ ၂.၁.၁၈ ရက်နေ့ဆေးရုံမှာ လေဆာနဲ့ ချေဖို့ချိန်းထား ပြီးသားကို မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က ညွှန်လို့ သောက်ကြည့်တာပါ…ဆေနည်းညွှန်တဲ့ ကို အသေး လေးလဲ ကျေး ဇူး အရမ်း တင်ပါတယ်… သူ့မိတ်ဆွေတုန်းက လဲ ဘန် ကောက် သွားဖို့ လုပ် ပြီးသား ပါ… ဆန်ဆေးရေကို
ဆန်တအိုးကြီး ဆေးစရာ မလိုပါခင်ဗျာ… လက်တစ်ဆုက်လောက်ကို ဂိုင်း ဖန်ခွက်ကြီး ထဲ ထည့်ဆေး ၂ ကြိမ်မြောက် လောက်က ရေကိုယူ. စ.လင်ကို လက်လေးဆစ်ခန့် ၂ ပင်လောက်ယူပါးပါးလှီးပြီး နာရီဝက်လောက်စိမ်ပြီးရင် သောက်ပါ…တစ်နေ့သုံးကြိမ် ပါ ..လူတိုင်းနဲ့တော့ ကျချင်မှ ကျမှာ ပါ ….တချို့က ငါးပြေမနဲ့ ဇောင်းခါးသီး ချက်စားကြသလို တချို့က ကျောက်ကွဲ ရွက် စားကြပါတယ်…
ကြောကျတညျနလေား..မပူပါနဲ့…၂ ခှကျတညျး သောကျရုံနဲ့ တညျနတေဲ့ကြောကျ ကလြာတဲ့ မွနျမာ့ဆေးနညျးလေးကို
ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ…ဆနျဆေးရေ နဲ့ စပါးလငျ စိမျပွီး သောကျ တာတဈညနဲ့ တဈမနကျ ၂ ခှကျသောကျရုံရှိသေးတယျ ကြောကျ ကလြာတယျ…
အဖေ့ ဆီက ဘာပဲဖွဈဖွဈ ဆေးနညျးဖွနျ့ပေးတာပါ…လကျတှေ့ တဈရကျနဲ့တဈည အောငျ့ တာ မခံနိုငျ လို့ ဆေးရုံပွတာ ၂.၁.၁၈ ရကျနဆေ့ေးရုံမှာ လဆောနဲ့ ခဖြေို့ခြိနျးထား ပွီးသားကို မိတျဆှတေဈယောကျက ညှနျလို့ သောကျကွညျ့တာပါ…ဆနေညျးညှနျတဲ့ ကို အသေး လေးလဲ ကြေး ဇူး အရမျး တငျပါတယျ… သူ့မိတျဆှတေုနျးက လဲ ဘနျ ကောကျ သှားဖို့ လုပျ ပွီးသား ပါ… ဆနျဆေးရကေို
ဆနျတအိုးကွီး ဆေးစရာ မလိုပါခငျဗြာ… လကျတဈဆုကျလောကျကို ဂိုငျး ဖနျခှကျကွီး ထဲ ထညျ့ဆေး ၂ ကွိမျမွောကျ လောကျက ရကေိုယူ. စ.လငျကို လကျလေးဆဈခနျ့ ၂ ပငျလောကျယူပါးပါးလှီးပွီး နာရီဝကျလောကျစိမျပွီးရငျ သောကျပါ…တဈနသေုံ့းကွိမျ ပါ ..လူတိုငျးနဲ့တော့ ကခြငျြမှ ကမြှာ ပါ ….တခြို့က ငါးပွမေနဲ့ ဇောငျးခါးသီး ခကျြစားကွသလို တခြို့က ကြောကျကှဲ ရှကျ စားကွပါတယျ…
Source : Achawlaymyar, Kwee (Jeeptoolay)